4 Apr 2018 . 6:55 PM
အသိဥာဏ်တုလို့သင်သိထားတဲ့ Artificial Intelligence တွေက သင့်လက်ထဲက Smartphone ထဲမှာတင်မဟုတ်ပဲ သင်စိတ်ကူးယဉ်လို့ရတဲ့ နည်းပညာပစ္စည်းတော်တော်များများမှာ ပါဝင်လာနေပြီဖြစ်တာကြောင့် သင့်အနေနဲ့ AI တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုကစပြီး အနည်းငယ်နားလည်ထားတာပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ AI တွေကို နည်းပညာကုမ္ပဏီတော်တော်များများက သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးတွေကိုသုံးပြီးဖန်တီးနေခဲ့ကြတာ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာရှိနေခဲပါပြီ။ ကွန်ပျူတာတွေအပါအဝင် အခြားစက်ပစ္စည်းတွေကို AI အသုံးပြုပြီး လူတွေကိုကူညီပေးဖို့က AI တွေကိုဖန်တီးထားတဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးက လူစ်ယောက်ရဲ့ဦးနှောက်လို စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေလုပ်နိုင်အောင်ဖန်တီးထားတာကို AI လို့နာမည်တပ်လိုက်တာပါ။ AI တစ်ခုဖြစ်လာအောင်တော့ လူရဲ့ဦးနှောက်လိုမျိုး အကြောင်းအရာအသစ်တွေ၊ ပြဿနာအသစ်တွေကို တွေ့ရင်တွေ့သလို မှတ်သားပြီး အကြောင်းအရာအပေါ်မှာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး လိုအပ်တဲ့တွက်ချက်မှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ အကြံပြုချက် ဒါမှမဟုတ် အမိန့်ပေးစေခိုင်းတာမျိုးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမိန့်ပေးစေခိုင်းတာမျိုးဆိုတာမှာ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုကို လူရဲ့အကူအညီမပါပဲ လည်ပတ်မောင်းနှင်စေတာ၊ အိမ်က မီးတွေကိုလင်းလာစေတာ၊ ပိတ်သွားစေတာမျိုးတွေကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ AI တွေကိုဖန်တီးထားတဲ့နေရာမှာ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတာကြောင့် AI တိုင်းကိုအတူတူပဲလို့သတ်မှတ်လို့တော့မရပါဘူး။ သင့်ဖုန်းထဲက AI ကသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာအချိန်ဇယားနဲ့ သင်ကြည့်ချင်မယ့် ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင့်ကိုအကြံပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး အိမ်က ရေခဲသေတ္တာမှာပါတဲ့ AI ကတော့ဘယ်နေ့ နွားနို့ထပ်ဝယ်ရမလဲဆိုတာမျိုးကို အကြံပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
AI တွေကြောင့် ဘာတွေပြောင်းလဲလာမလဲ?
အရင်က တစ်ခုခုလုပ်ဖို့အတွက်၊ အစီအစဉ်ဆွဲရတာ၊ အချိန်ကိုပြန်စီမန်ခန့်ခွဲရတာတွေကို AI တွေကနေရာဝင်ယူသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် သင်ဟာနေ့တစ်နေ့ကို သက်သောင့်သက်သာနဲ့ ဖြတ်သန်းလာနိုင်တော့မှာပါ။ ဥပမာ-အိမ်တစ်လုံးအတွက်ဖန်တီးထားတဲ့ AI ကြောင့် မနက်မိုးလင်းတိုင်း၊ ညနေနေဝင်တိုင်း၊ ဒါမှမဟုတ်သင်အိမ်ကိုပြန်လာတိုင်းမှာ မီးတွေဖွင့်ပေးတာ၊ တံခါးတွေဖွင့်ပေးတာ၊ ခန်းဆီးလိုက်ကာတွေဖွင့်ပေးတာမျိုးတွေအပြင် သင့်တော်တဲ့ အိမ်တွင်းအပူချိန်ရနိုင်အောင် Air Conditioner ဒါမှမဟုတ် Heater တစ်ခုခုကို အပြင်ကရာသီဥတုအချက်အလက်ပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်သလိုဖွင့်တာ၊ ပိတ်တာတွေလုပ်ပေးမှာကြောင့် သင့်အတွက် အချိန်ကုန်သက်သာပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအင်လည်းခြွေတာရာရောက်ပါတယ်။ ကားထဲမှာဆိုရင်လည်း AI တွေက သင့်အတွက်အများကြီးကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင်တော့ သင့်အတွက် AI ကကားမောင်းပေးနိုင်တဲ့အဆင့်အထိရောက်နေပါပြီ။
AI တွေ အတူတွဲဖက်အလုပ်လုပ်လာခဲ့ရင်
အိမ်က AI စနစ်နဲ့ သင့်ကားထဲက AI စနစ်နှစ်ခုဟာ သင့်လက်ထဲကဖုန်းဆီက လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေရယူပြီးတာနဲ့ သင်ခရီးတစ်ခုထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် အိမ်တံခါးသော့ခတ်ဖို့မေ့ခဲတာ၊ မီးတွေပိတ်ဖို့မေ့သွားတာမျိုးတွေအတွက် AI တွေကသင်အိမ်ကထွက်တာနဲ့ အားလုံးလုပ်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် သင့်အတွက်အချိန်ကုန်သက်သာသလို စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။ AI တွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်လာနိုင်တာကတော့ တော်တော်လေးကောင်မွန်တဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အနာဂတ်မှာ AI ပါဝင်တဲ့ နည်းပညာပစ္စည်းတွေလည်း ထွက်ရှိလာဖို့ရှိနေတာကြောင့် အဝတ်လျှော်စက်တွေ၊ ကားရေဆေးတဲ့စက်ကြီးတွေအပြင် Container တင်သင်္ဘောကြီးတွေကိုပါ AI အသုံးပြပြီး လမ်းကြောင်းရှာတာ၊ မောင်းနှင်တာမျိုးတွေအထိဖြစ်လာမှာပါ။ 2016 နောက်ပိုင်းမှာ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီး အများကြီးတိုးတက်လာခဲ့သလို သိသာတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
AI တွေက လူတွေမဟုတ်ပါဘူး
ကွန်ပျူတာတွေဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း လက်ရှိအခြေအနေထိ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသလောက်ကတော့ ဘယ် AI မှလူ့ဦးနှောက်နီးပါးမြန်ဆန်တဲ့ တွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်မှုတွေကို မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ Computer တစ်မျိုးကို အမှီပြုပြီးအလုပ်လုပ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်နေတာကြောင့် အမြဲတမ်းယုံကြည်စိတ်ချလို့လည်းမရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နည်းပညာတိုးတက်တာ ပိုမြန်လာပြီဖြစ်တာကြောင့် AI တွေ လက်တွေ့အသုံးချမှုအပိုင်းမှာအရင်ကထက်ပိုများလာသလို ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ရာခိုင်နှုန်းလည်းပိုများလာပါပြီ။ လက်ရှိ AI အသုံးပြုထားတဲ့အရာတွေကတော့ Smart Speaker တွေ၊ ရေခဲသေတ္တာတွေ၊ ကင်မရာတွေကနေပြီး မော်တော်ကားတွေ အင်တာနက် Service တွေနဲ့ Smartphone တွေ အစရှိတဲ့နေရာတွေမှာ တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ AI တွေကိုအခုထက်ပိုပြီးတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးချလာနိုင်ဦးမှာဖြစ်တာကြောင့် AI နဲ့ပတ်သက်လို့ စိတ်ဝင်စားစရာ ပစ္စည်းသစ်တွေ မော်တော်ကားတွေ တွေ့ရဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အသိဉာဏျတုလို့သငျသိထားတဲ့ Artificial Intelligence တှကေ သငျ့လကျထဲက Smartphone ထဲမှာတငျမဟုတျပဲ သငျစိတျကူးယဉျလို့ရတဲ့ နညျးပညာပစ်စညျးတျောတျောမြားမြားမှာ ပါဝငျလာနပွေီဖွဈတာကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ AI တှနေဲ့ပတျသကျလို့အခုကစပွီး အနညျးငယျနားလညျထားတာပိုကောငျးပါလိမျ့မယျ။ AI တှကေို နညျးပညာကုမ်ပဏီတျောတျောမြားမြားက သူတို့ရဲ့ကိုယျပိုငျစိတျကူးတှကေိုသုံးပွီးဖနျတီးနခေဲ့ကွတာ အခြိနျအတိုငျးအတာတဈခုမှာရှိနခေဲပါပွီ။ ကှနျပြူတာတှအေပါအဝငျ အခွားစကျပစ်စညျးတှကေို AI အသုံးပွုပွီး လူတှကေိုကူညီပေးဖို့က AI တှကေိုဖနျတီးထားတဲ့ အဓိကရညျရှယျခကျြဖွဈပါတယျ။
ကှနျပြူတာတဈလုံးက လူဈယောကျရဲ့ဦးနှောကျလို စဉျးစားတှေးချေါမှုတှလေုပျနိုငျအောငျဖနျတီးထားတာကို AI လို့နာမညျတပျလိုကျတာပါ။ AI တဈခုဖွဈလာအောငျတော့ လူရဲ့ဦးနှောကျလိုမြိုး အကွောငျးအရာအသဈတှေ၊ ပွဿနာအသဈတှကေို တှရေ့ငျတှသေ့လို မှတျသားပွီး အကွောငျးအရာအပျေါမှာ ခှဲခွမျးစိတျဖွာပွီး လိုအပျတဲ့တှကျခကျြမှုတှလေုပျပွီးတဲ့အခါမှာတော့ ဆုံးဖွတျခကျြ၊ အကွံပွုခကျြ ဒါမှမဟုတျ အမိနျ့ပေးစခေိုငျးတာမြိုးထှကျလာမှာဖွဈပါတယျ။ အမိနျ့ပေးစခေိုငျးတာမြိုးဆိုတာမှာ စကျပစ်စညျးတဈခုကို လူရဲ့အကူအညီမပါပဲ လညျပတျမောငျးနှငျစတော၊ အိမျက မီးတှကေိုလငျးလာစတော၊ ပိတျသှားစတောမြိုးတှကေိုဆိုလိုတာပဲဖွဈပါတယျ။ AI တှကေိုဖနျတီးထားတဲ့နရောမှာ ရညျရှယျခကျြအမြိုးမြိုးကှဲပွားနတောကွောငျ့ AI တိုငျးကိုအတူတူပဲလို့သတျမှတျလို့တော့မရပါဘူး။ သငျ့ဖုနျးထဲက AI ကသငျ့ရဲ့တဈနတေ့ာအခြိနျဇယားနဲ့ သငျကွညျ့ခငျြမယျ့ ရုပျရှငျတှနေဲ့ပတျသကျပွီး သငျ့ကိုအကွံပေးတာမြိုးတှလေုပျပေးမှာဖွဈပွီး အိမျက ရခေဲသတ်ေတာမှာပါတဲ့ AI ကတော့ဘယျနေ့ နှားနို့ထပျဝယျရမလဲဆိုတာမြိုးကို အကွံပွုပေးမှာဖွဈပါတယျ။
AI တှကွေောငျ့ ဘာတှပွေောငျးလဲလာမလဲ?
အရငျက တဈခုခုလုပျဖို့အတှကျ၊ အစီအစဉျဆှဲရတာ၊ အခြိနျကိုပွနျစီမနျခနျ့ခှဲရတာတှကေို AI တှကေနရောဝငျယူသှားမှာဖွဈတာကွောငျ့ သငျဟာနတေ့ဈနကေို့ သကျသောငျ့သကျသာနဲ့ ဖွတျသနျးလာနိုငျတော့မှာပါ။ ဥပမာ-အိမျတဈလုံးအတှကျဖနျတီးထားတဲ့ AI ကွောငျ့ မနကျမိုးလငျးတိုငျး၊ ညနနေဝေငျတိုငျး၊ ဒါမှမဟုတျသငျအိမျကိုပွနျလာတိုငျးမှာ မီးတှဖှေငျ့ပေးတာ၊ တံခါးတှဖှေငျ့ပေးတာ၊ ခနျးဆီးလိုကျကာတှဖှေငျ့ပေးတာမြိုးတှအေပွငျ သငျ့တျောတဲ့ အိမျတှငျးအပူခြိနျရနိုငျအောငျ Air Conditioner ဒါမှမဟုတျ Heater တဈခုခုကို အပွငျကရာသီဥတုအခကျြအလကျပျေါမူတညျပွီး လိုအပျသလိုဖှငျ့တာ၊ ပိတျတာတှလေုပျပေးမှာကွောငျ့ သငျ့အတှကျ အခြိနျကုနျသကျသာပွီး လြှပျစဈစှမျးအငျလညျးခွှတောရာရောကျပါတယျ။ ကားထဲမှာဆိုရငျလညျး AI တှကေ သငျ့အတှကျအမြားကွီးကူညီပေးနိုငျမှာဖွဈပွီး အခုဆိုရငျတော့ သငျ့အတှကျ AI ကကားမောငျးပေးနိုငျတဲ့အဆငျ့အထိရောကျနပေါပွီ။
AI တှေ အတူတှဲဖကျအလုပျလုပျလာခဲ့ရငျ
အိမျက AI စနဈနဲ့ သငျ့ကားထဲက AI စနဈနှဈခုဟာ သငျ့လကျထဲကဖုနျးဆီက လိုအပျတဲ့အခကျြအလကျတှရေယူပွီးတာနဲ့ သငျခရီးတဈခုထှကျခဲ့မယျဆိုရငျတောငျ အိမျတံခါးသော့ခတျဖို့မခေဲ့တာ၊ မီးတှပေိတျဖို့မသှေ့ားတာမြိုးတှအေတှကျ AI တှကေသငျအိမျကထှကျတာနဲ့ အားလုံးလုပျပေးမှာဖွဈတာကွောငျ့ သငျ့အတှကျအခြိနျကုနျသကျသာသလို စိတျပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။ AI တှအေခငျြးခငျြးခြိတျဆကျအလုပျလုပျလာနိုငျတာကတော့ တျောတျောလေးကောငျမှနျတဲ့တိုးတကျမှုတဈခုဖွဈပွီး အနာဂတျမှာ AI ပါဝငျတဲ့ နညျးပညာပစ်စညျးတှလေညျး ထှကျရှိလာဖို့ရှိနတောကွောငျ့ အဝတျလေြျှာစကျတှေ၊ ကားရဆေေးတဲ့စကျကွီးတှအေပွငျ Container တငျသင်ျဘောကွီးတှကေိုပါ AI အသုံးပွပွီး လမျးကွောငျးရှာတာ၊ မောငျးနှငျတာမြိုးတှအေထိဖွဈလာမှာပါ။ 2016 နောကျပိုငျးမှာ AI နဲ့ပတျသကျပွီး အမြားကွီးတိုးတကျလာခဲ့သလို သိသာတဲ့ပွောငျးလဲမှုတှလေညျးဖွဈပျေါခဲ့ပါတယျ။
AI တှကေ လူတှမေဟုတျပါဘူး
ကှနျပြူတာတှဘေယျလောကျကောငျးကောငျး လကျရှိအခွအေနထေိ ရှာဖှတှေရှေိ့ထားသလောကျကတော့ ဘယျ AI မှလူ့ဦးနှောကျနီးပါးမွနျဆနျတဲ့ တှေးချေါဆုံးဖွတျမှုတှကေို မလုပျနိုငျသေးပါဘူး။ Computer တဈမြိုးကို အမှီပွုပွီးအလုပျလုပျပေးတဲ့အရာဖွဈနတောကွောငျ့ အမွဲတမျးယုံကွညျစိတျခလြို့လညျးမရသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ နညျးပညာတိုးတကျတာ ပိုမွနျလာပွီဖွဈတာကွောငျ့ AI တှေ လကျတှအေ့သုံးခမြှုအပိုငျးမှာအရငျကထကျပိုမြားလာသလို ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ရာခိုငျနှုနျးလညျးပိုမြားလာပါပွီ။ လကျရှိ AI အသုံးပွုထားတဲ့အရာတှကေတော့ Smart Speaker တှေ၊ ရခေဲသတ်ေတာတှေ၊ ကငျမရာတှကေနပွေီး မျောတျောကားတှေ အငျတာနကျ Service တှနေဲ့ Smartphone တှေ အစရှိတဲ့နရောတှမှော တှရေ့မှာပဲဖွဈပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာတော့ AI တှကေိုအခုထကျပိုပွီးတှငျတှငျကယျြကယျြအသုံးခလြာနိုငျဦးမှာဖွဈတာကွောငျ့ AI နဲ့ပတျသကျလို့ စိတျဝငျစားစရာ ပစ်စညျးသဈတှေ မျောတျောကားတှေ တှရေ့ဦးမှာပဲဖွဈပါတယျ။